Lalàna… tsy mahatapi-dalan-kaleha | NewsMada
Lalàna… tsy mahatapi-dalan-kaleha
Hanao ahoana ihany ny fifidianana ben’ny Tanàna sy ny fifidianana mpanolotsain’ny Tanàna? Andrasana izay ho fanapahan-kevitry ny fitondram-panjakana. Ho raikitra amin’ity taona ity ihany sa tsia? Mbola hifampidinihana na hifampierana izany, ka ho hita eo…
Tsy lavina: ny teny miakatra, ifampierana; ny teny midina, ifampifehezana. Na izany aza, sao ela fikenona ka ho very fotoana amin’ny fifampidinihana sy fifampierana lava amin’izay mitranga sy atao rehetra? Eny, na eo aza ny hoe; izay lava dinika, lava rariny.
Tsy izany ve no anisan’ny ilàna ny fifidianana mpitondra amin’ny fifandimbiasam-pahefana hoe ara-pomba demokratika? Nampidramina fahefana hanapa-kevitra amin’izay efa nofaritan’ny lalàna, hanatanteraka izay fanamby nifidianan’ny vahoaka azy…
Mbola miara-dalàna amin’izany koa ny lalàna ifampifehezana sy ifampitondrana, mba tsy hiadian-kevitra avokoa izay mitranga sy atao rehetra; eny, na efa misy sy mazava izao aza ny lalàna: inona no marina na hatao, ny an’iza no harahina sy hotanterahina… ?
Na ahoana na ahoana ary na inona na inona mitranga sy atao, tsy ilaozan’izay manan-kambara hatrany: ny itsitokotokoan’ny loha, samy manana ny heviny. Rehefa inona na ahoana no atao sy ilaina ny hoe fifampidinihana, na rehefa iza no miteny, henoina… ?
Anisan’ny mety hahatonga ahiahy tsy ihavanana izay, rehefa tsy ny lalàna misy no hajaina sy hampiharina ary tanterahina avy hatrany? Tsy inona fa hoe kajikajy sy paipaika politika, araka ny ahiahy noho ny tsy fahatokisan-tena mahazatra ny sasany hatramin’izay.
Saika ambonin’ny lalàna mandrakariva ny dinika politika? Na mahatapi-dalan-kaleha, sanatria, ny lalàna, ka voatery hitadiavam-bahaolana hafa tsy fidiny amin’ny fifampidinihana sy fifampierana… politika. Tonga amin’izany ve ny toe-draharaha amin’izao?
Raha tiana ny hanova tokoa ny fomba fanaovana politika, tsy anisan’ny fototra sy voalohany amin’izany ve ny fanajana sy fampiharan-dalàna, ny fisaraham-pahefana, ny tsy fanavahana raha misy sy tsy azo ihodivirana ny hoe fifampidinihana sy fifampierana…?